LEGO Rebuild the World ကြော်ငြာအသစ်၌ငါတို့တွေ့သောခြောက်စုံ
20 / 09 / 2021 20 / 09 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 265 Views စာ0မှတ်ချက် 10182 Caféထောင့်, 10193 အလယ်ခေတ်စျေးကွက်, 10220 Volkswagen က T1 ကို Camper ဗန်, 10246 စုံထောက်ရဲ့ရုံး, ၁၀၂၆၀ Downtown Diner, 10265 Ford ကား Mustang, 31120 အလယ်ခေတ်ရဲတိုက်, 60214 ဘာဂါဘားမီးသတ်, ကြော်ငြာ, ကြော်ငြာ, ကြော်ငြာ, ရဲတိုက်, City, Creator Expert, ညနေစာ, မြင်းစီးသူရဲ, Lego, Lego ကြော်ငြာ, Lego ရဲတိုက်, Lego CIty, Lego Creator Expert, Lego ကမ္ဘာကြီးကိုပြန်လည်တည်ဆောက်, ကမ္ဘာကြီးကိုပြန်လည်တည်ဆောက်, ရွာ
အဆိုပါ Lego Group သည် Rebuild the World campaign အတွက်ကြေငြာအသစ်တစ်ခုကိုကြေငြာခဲ့ပြီး၎င်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့နိုင်သောလျှို့ဝှက်အစုံအချို့ပါ ၀ င်သည်။
မူရင်းနဲ့တော်တော်တူပါတယ် ကမ္ဘာ့ဗီဒီယိုကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ပါတရားဝင်ဖန်တီးမှုများကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်သူတို့၏ TV ကိုပွဲ ဦး ထွက်စေသည် ကြော်ငြာ၎င်းတွင်သူ၏လေးလံသောသံချပ်ကာသံလွင်မြစ်ကိုဖြတ်ကူးရန်ရှာဖွေမှုတွင်သူရဲကောင်းတစ် ဦး ပါ ၀ င်သည်။
ဖန်ဆင်းရှင်မှ Castle အထိ၊ ငါတို့အသစ်တွေ့တဲ့ပုံစံခြောက်မျိုးရှိတယ် Lego ဗီဒီယိုနှင့်၎င်းတို့ကိုသင်ကိုယ်တိုင်ကြည့်ရှုရန်နေရာ -
Creator Expert 10182 Caféထောင့်
The Damp Knight ၏ပုံပြင်၌အကိုးအကားအပြည့်ဆုံးပြကွက်သည် Modular Buildings Collection ထဲသို့ရှေးကျသောဝင်ရောက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ 10182 Café Corner ၏အထင်ကရအုတ်ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသောဆိုင်းဘုတ်ကိုအဆောက်အ ဦး ၏ဘေး၌ပြသထားသည်၊ ၎င်းသည်သူ့ကိုယ်သူမူလပုံစံမဟုတ်ချေ။ သူရဲကောင်းသည်ကင်မရာကိုရင်ဆိုင်သောအခါဤအီစတာကြက်ဥကိုမြင်နိုင်သည်။
ရဲတိုက် ၁၀၁၉၃ အလယ်ခေတ်ဈေးရွာ
အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောတူညီသောမြင်ကွင်းတစ်ခု၌နောက်ထပ်အလားအလာတွေ့ရှိချက်သည် classic ရဲတိုက် ၁၀၁၉၃ အလယ်ခေတ်ဈေးရွာ ပြတင်းပေါက်နှစ်ခုပါ ၀ င်သောသစ်သားဘောင်အိမ်များကိုဤနေရာတွင်ပုံစံတူအရောင်တောက်တောက်အဝါဖြင့်အစားထိုးထားသည်၊ ဒီဇိုင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ ၃၁၁၂၀ အလယ်ခေတ်ရဲတိုက် ၎င်းသည်လူကြိုက်များသောတည်ဆောက်မှုကိုပြန်ရခြင်းကိုမဆိုလိုနိုင်သော်လည်းကြော်ငြာသည်နောက်ပြောင်မှုဖြစ်နိုင်သည် နောက်ထပ် LEGO ဆိတ်များ.
Creator Expert 10246 စုံထောက်ရဲ့ရုံး
နောက်ထပ်အမှတ်ရစရာ modular အဆောက်အ ဦး ဆိုင်းဘုတ်တစ်ခုသည်သူရဲသည်ကင်မရာကိုတိုက်ရိုက်မျက်နှာမူသောနေရာတွင်ထပ်မံပြသသောအမှတ်အသားဖြစ်သည်။ ၁၀၂၄၆ စုံထောက်ရုံး၏အလှဆင်မှုအတွက်တည်ဆောက်ပုံကိုအဝါရောင်အစား 'ရေကူးကန်' ဟုရေးထားသောရုံးခန်းနှင့်အတူတွေ့ရဖွယ်ရှိသည်။ သစ်သားအိမ်နှင့်ပေါင်းစပ်ခြင်းသည်အဝါရောင်သည်ဗီဒီယိုအတွက်စမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်ဟုဆိုလိုသည်။
CITY 60214 ဘာဂါဘားမီးသတ်
Modular Buildings များနှင့်ဝေးရာသို့ပြန်လည်တည်ဆောက်သောကမ္ဘာကြေငြာကြော်ငြာများ Lego CITY flaming burger မှအခြားအလှဆင်ဆိုင်းဘုတ်တစ်ခုနှင့် 60214 ဘာဂါဘားမီးသတ်မရ။ မူလအစပိုင်း၌မီးသတ်သမားများသည်မီးငြိမ်းသတ်ရန်အတွက်ဤနေရာ၌မတော်တဆမှုတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်ဟုအကြံပြုသည်။art.ရာဝတီ Lego မြို့။
Creator Expert ၁၀၂၆၀ Downtown Diner
တူညီတဲ့မြင်ကွင်းရဲ့ညာဘက်ခြမ်းမှာပိုတောက်ပတဲ့ Easter ကြက်ဥတစ်လုံးအဖြစ်၊ ဒီအုတ်ကတည်ဆောက်ထားတဲ့ဆိုင်းဘုတ်ကိုဒီအချိန်ကစပြီးတွေ့နိုင်ပါတယ်။ Creator Expert ၁၀၂၆၀ Downtown Dinerမရ။ ပန်းရောင်ပလပ်စတစ်အက္ခရာများကိုစားသောက်ဆိုင်အတွက်ရပ်တည်မှုကြေငြာတစ်ခုတွင်တွေ့နိုင်သည်၊ Diner ၏ဤဗားရှင်းကိုပိုကြီးသောအဆောက်အအုံတစ်ခုတွင်ပေါင်းစည်းခြင်းသို့မဟုတ်အနည်းဆုံးသီးခြားပြသခြင်းမရှိခြင်းကိုညွှန်ပြသည်။
Creator Expert မော်တော်ယာဉ်
ဤရှာဖွေရန်အစုံများကိုရှာဖွေသောမော်တော်ယာဉ်မော်ဒယ်တစ်စုံဖြစ်သည် Creator Expertမရ။ ကြော်ငြာ၏အဆုံးသို့ရောက်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်ပေါ်လာသည် 10265 Ford ကား Mustangတံတားတည်ဆောက်ရာတွင်ကူညီရန်နောက်ထပ်သေးငယ်သည့်အရာအချို့ကိုယူဆောင်လာသည်။ ကားနှင့်အတူ Volkswagen Camper Van မှလွဲ၍ အခြားအနီရောင်အစီအစဉ်ကိုရည်ညွှန်းသည် 10220 Volkswagen က T1 ကို Camper ဗန်.
← LEGO နှင့်ပတ်သက်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များ Spider-Man 2022 စုံ
အုတ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော terrariums ပရောဂျက်သည် LEGO တွင် 10K ထိခဲ့သည် Ideas →